EZIPHUMA A uhlobo yokufakelwa abrasive.3 namachibi 2 aluminium (Al2O3) okuqukethwe kuka 98%, kwaba nabantu bezizwe ezixubile ezifana equkethe esincane oxide ferric, Silicon oxide, appera emhlophe. ezimhlophe aluminium oxide uhlobo ephezulu grade Refractories, wenziwa eliphezulu alumina ngu encibilika ngenhla 2000 aluminium oxide namatshana kagesi arc esithandweni kanye nokupholisa. Kuyinto emhlophe ne crystal isigaba esiyinhloko alphaAl2O3. I alumina ezimhlophe akhiqizwa titling kagesi arc esithandweni ine advantag ...
A uhlobo yokufakelwa abrasive.3 namachibi 2 aluminium (Al2O3) okuqukethwe kuka 98%, kwaba nabantu bezizwe ezixubile ezifana equkethe esincane oxide ferric, Silicon oxide, appera emhlophe.
ezimhlophe aluminium oxide uhlobo ephezulu grade Refractories, wenziwa eliphezulu alumina ngu encibilika ngenhla 2000 aluminium oxide namatshana kagesi arc esithandweni kanye nokupholisa. Kuyinto emhlophe ne crystal isigaba esiyinhloko alphaAl2O3. I alumina ezimhlophe akhiqizwa titling kagesi arc esithandweni has inzuzo okusezingeni eliphezulu kwabantu ngobuningi kanye porosity ongaphakeme kanye nokusimama ivolumu ezishisayo ukushaqeka ukumelana kungathuthukiswa.
usayizi namatshana: 12 # -220 #
1. bobumba ukwelashwa surface
3. Ukugaya / wokucwebezelisa
impahla ukumelana nomlilo
Ukubaluleka esifakiwe (%)
3.90g / imiz cm3
okuqukethwe lomcebo kazibuthe
Abrasives sasondelana futhi Abrasives Camera
1.lapping, wokucwebezelisa, zokuhlobisa Tile-non-skid, nokucindezelwa blasting.
ukwelashwa 3.Surface / kokuqeda
5.Ceramic Tiles zobumba ekhethekile
6.Fluidized Umbhede Okuveza futhi Skin / zamazinyo Ukunakekela
7.grinding okusezingeni eliphezulu carbon steel, ngesivinini steel steel chilled
Previous: Copper Shot / yethusi Sika Wire Shot
Okulandelayo: Engagqwali Sika Wire Zezıhlabane
Ithusi slag # 4